Jiro pendant, jiro valin-drihana, jiro latabatra - jiro haus
Tongasoa eto amin'ny jiro haus
Haus Lighting Limited dia mpamorona jiro mivoatra mavitrika, izay manome vahaolana jiro tsara indrindra ho an'ny tranobarotra sy trano fonenana.
Haus Lighting Voafetra ny safidinao azo antoka.
Ny jiro rehetra dia fenoina rehefa avy nanao fanaraha-maso feno sy fitsapana miaraka amin'ny tatitra mazava momba ny QC mba hiantohana ny kalitao avo lenta avo lenta.
Fahasamihafana amin'ny fomba
Ny fomban'ny vokatra avy aminay dia avy amin'ny jiro haingon-trano ao an-dakozia Retra ka hatramin'ny lamaody maro kokoa araka ny fironana lamaody sy ny lazany, toy ny jiro maoderina sy tsotra famolavolana jiro LED, jiro kristaly mihaja ary hazavana namboarina araka ny takiana.
Ny vokatra jiro dia be mpampiasa amin'ny trano fandraisam-bahiny, sampan-draharaha, trano fonenana, ary nahazo laza tsara amin'ny serivisy tsara kalitao sy maharitra.
Vokatra mahafinaritra sy azo ampiharina azo isafidianana.
Jiro pendant avo avoavo
Kavina volamena pendant hazavana HL60L10
Miezaka izahay mba ho mpiara-miombon'antoka amin'ny jiro azo itokisana miaraka amina endrika maivana, vidiny avo lenta ary takatry ny vidiny. Ny kalitao sy ny lanja dia manohy ny laharam-pahamehana amin'ny haus fahazavana!
Haus Lighting Limited dia mpamorona jiro mivoatra mavitrika, izay manome vahaolana jiro tsara indrindra ho an'ny tranobarotra sy trano fonenana. Niorina tamin'ny 2013 izahay miaraka amin'ny zavamaniry mpanamboatra mihoatra ny 1500 metatra toradroa sy efitrano fampirantiana 200 metatra toradroa, hita ao amin'ny tanàna Zhongshan manan-tantara any Sina.
Izahay dia tena mamokatra hazavana haingon-trano anatiny isan-karazany, ao anatin'izany ny chandelier, pendant lamp, chandelier, lampo valiha, jiro amin'ny rindrina, jiro latabatra, jiro gorodona ary jiro ho an'ny fanamboarana miaraka amin'ny safidy fitaovana isan-karazany, toy ny vy, aliminioma, vy vy, varahina, vera, marbra ary misy bebe kokoa.